Unclassified - South Africa ~ 25c Definitive ~ Flowers ~ Perf. 12½ ~ SG 426 ~ 1977 ~ Used
South Africa ~ 25c Definitive ~ Flowers ~ Perf. 12½ ~ SG 426 ~ 1977 ~ Used (Item number: #147919705)
Description: South Africa ~ 25c Definitive ~ Flowers ~ Perf. 12½ ~ SG 426 ~ 1977 ~ UsedYear: 1977Condition: UsedVISIT WOOMIK'S STORE TO SEE ALL MY ITEMS View all my SOUTH AFRICA items
Last update: 08:14:07
± US$0.41 £0.32
South Africa ~ F.de Klerk/Inauguration ~ SG 695 ~ 1989 ~ Used
South Africa ~ 25c Definitive ~ Flowers ~ Perf. 14 x 13½ ~ SG 426c ~ 1977 ~ Used
South Africa ~ 40c Defin./Cacti/Succulents ~ SG 664 ~ 1988-93 ~ Used
South Africa ~ Sports ~ Grand Prix ~ SG 760 ~ 1992 ~ Used
South Africa ~ Fuel Conservation ~ SG 458 ~ 1979 ~ UM/MNH
South Africa ~ 20c Definitives/Buildings ~ SG 522 ~ 1982 ~ UM/MNH
South Africa ~ 3c Definitive ~ Flowers ~ Perf. 14 x 13½ ~ SG 416a ~ 1977 ~ Used
South Africa ~ Rock Paintings ~ SG 616 ~ 1987 ~ UM/MNH